बालबालिकाको आँखामा गाजलः कति हानिकारक ? - Gokarna News
बालबालिकाको आँखामा गाजलः कति हानिकारक ?
शुक्रबार, चैत २९, २०७५ by Gokarna News
काठमाडौं– नेपालमा नवजात शिशुको आँखामा गाजल लगाउने पुरानो प्रचलन रहेको छ । बालबालिकाको आँखामा लगाइएको गाजलले उनीहरुलाई निकै आकर्षक देखिन्छ । आँखा राम्रो देखाउनका लागि मात्र नभएर स्वस्थ राख्न गाजल लगाउनु पर्ने पुरानो मान्यता छ तर यो वास्तविक हो त ?
गाजल लगाइदिने आमाहरुको तर्क हुन्छ, बालबालिका राम्रा देखिन्छन् । गाजलले आँखाको ज्योति राम्रो हुन्छ, त्यस्तै बालबालिकामाथि अरुले आँखा नलगाउन् भन्नका लागि गाजल लगाउने गरिएको छ ।
लगाउन हुन्छ ?
शिशुको आँखा उसको शरीरको सबैभन्दा सम्बेदनशील अंग हो । बालबालिकाले ठूला मानिस जस्तो आफ्नो आँखाको हेरचाह गर्न सक्दैनन् । र आँखामा आएको समस्या बताउन पनि सक्दैनन् ।
आँखामा गाजल लगाउनु त्यति सुरक्षित मानिँदैन तर नेपालमा यसको व्यापक रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ । बालबालिका र युवतीहरुले यसको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बालबालिकामा गाजल लगाइदिँदा उनीहरुलाई यसले पीडा दिन सक्छ ।
घरमा बनाइएको गाजल लगाउँदा सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच्ने गर्नु भएको छ भने त्यो पनि सही नहुन सक्छ । किनकी गाजल लगाउँदा त्यसले बालबालिकामा इन्फेक्सन हुन सक्छ । बालबालिकाले आँखामा लगाइएको गाजललाई हातले चलाउने गर्छन् र हातमा पनि इन्फेक्सन हुन सुक्छ ।
बजारमा पाइने गरेको गाजलमा लिड(सीसा) को प्रयोग अत्याधिक हुने गरेको छ । लिडको आँखामा प्रयोग निकै हानिकारक हुन्छ । गाजलमा मुख्य रुपमा एमार्फसे, कार्बोन, जिंकेट, म्याग्नेटाइट तथा माइनिमम पाइन्छ । जब शिशुको आँखामा लामो समयसम्म गाजलको प्रयोग हुन्छ तव यसले ठूलो असर गर्छ ।
गाजलमा हुने यी तत्वले शिशुको दिमागमा नराम्रो असर पर्छ र शिशुलाई बोनम्यारो हुने खतरा हुन्छ । गाजलबाट भएको संक्रमणका कारण आँखामा पानी आउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । आँखामा हुने कार्निया धूलो, माटो र फोहरप्रति निकै सम्वेदनशील हुन्छ ।
त्यसैले गाजल लगाउनु अघि एकपटक विचार गर्नुहोला, लगाउँदा राम्रो देखिएपनि यसबाट हुने असरले कतै तपाईको बालबालिकामा आँखाको समस्या त आउँदैन ।
साउनमा किन लगाउने हरियो ? यस्तो छ धार्मिक कारण
के तपाईलाई हृदयघातको खतरा त छैन ? यसरी थाहा पाउनुस्
बाटोमा हिँड्दा पैसा भेटियो ? हुनसक्छ, यस्तो कुराको संकेत
नेवि संघद्वारा ५ दिने आन्दोलनको घोषणा, कारण यस्तो
सावधान ! यसकारण खतरनाक छ ‘फेसएप’